दसैं मनाउन घर हिडेकी २३ बर्षीया लक्ष्मी बाटैमा अस्ताइन् ! – Life Nepali
दसैं मनाउन घर हिडेकी २३ बर्षीया लक्ष्मी बाटैमा अस्ताइन् !
सप्तरी । मुलुक दशैंको रौनकमा डुबिरहेको बेला शनिबार सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका १ स्थित बीपी राजमार्गमा मिनी बस दु’र्घटना भयो । सो दुर्घट’नामा तीन जनाले ज्या न गुमाए । मृ’त्यू भएका तीन जनामध्ये एक थिइन्, राजविराज ७ निवासी २३ बर्षीया लक्ष्मी देव । दसैंका यात्रु लिएर काठमाडौंबाट सिराहा जाँदै गरेको बा ३ ख २३५९ नम्बरको मिनिबस काभ्रे र सिन्धुलीको सिमानामा दुम्जा नेपालथोक नजिक दु’र्घट’ना भएको थियो । दशैं मनाउन घरतर्फ आइरहेकी लक्ष्मीको दु’र्घट’नामा ज्या न गएपछि परिवार शो’काकुल छन् ।
लक्ष्मी काठमाडौंमा इन्जिनियरिङ्ग तेस्रो बर्षमा अध्ययनरत थिइन् । देव परिवारले ५ बर्षअघि पनि दशैंमा नै अर्का एक जना सदस्य गुमाएको थियो । २०७२ सालको दशैंमा मृ’तक लक्ष्मीका दाजु जितेन्द्रनारायण देवको ह’त्या भएको थियो । २०७२ साल असोज ३० गते उनको श’व बरहीबीरपुर गाविसको नहर छेउमा फेला परेको थियो । सीएमए पास गरेका देव रोजगारी नपाएपछि पसल चलाएर गुजारा गरिरहेका थिए । उनको २०७२ सालकै वैशाख १७ गते झापाको शिवगञ्ज निवासी विष्णुमाया देवसँग विवाह भएको थियो ।
पतिको वियोगमा बिष्णुमायाको पनि ज्या’ न गइसकेको छ । ५ बर्ष बि’त्दा पनि उनको ह’त्याको का’रण खुल्न सकेको छैन भने ह त्यारा पनि प क्राउ परेका छैनन् । छोराको मृ’त्यूको घा’उ आलै रहेका बेला छोरीको पनिे दु’र्घ’टनामा परी ज्या न जाँदा बाबुआमाले अर्काे ब’ज्रपात सहनुपरेको छ । स्थानीय गणेशलाल भन्छन्, ‘बृद्व आ’माबुवाको आँ’शु अ’झै थामिएको छैन । उनीहरु कसैसँग बोल्न’ समेत तयार छैनन् ।’
Previous छोरी’लाई अष्ट्रेलिया पठाउन भाइसँगै विवाह !
Next कोहि नेपालीहरुले दशै हाम्रो होइन! हिन्दुको हो ,भन्छन बिदेशी ले धुनधान सग दशै मनाउछन!